Voavaha ny misterin'ny pejy Google | Martech Zone
Fa ho azy fotsiny, dia nanamarina indray ny Google Pagerank aho izao Popuri… Azo antoka fa ilay atody gisa be. Aotra. Zilch. Nada. Noho ny te hahafanta-javatra, dia niditra aho http: //www.dknewmedia.com fa tsy http: //martech.zone… ary voila! Tao ny voninahiny rehetra! PageRank = 3 miaraka amina backlinks 1,050 ao amin'ny tranokalako.
Hafahafa kely amiko ity satria nisoratra anarana (maimaim-poana) aho tamin'ny Google Search Console ary apetraho amin'ny www ny fonenako voalohany, fa tsy tsy misy. Ka tena tsy haiko mihitsy hoe maninona no ao io setting io.
Ka… zavatra vitsivitsy no nataoko androany hariva mba hanandramako antoka fa manana tsy fitoviana aho mandritra ny fiantsoana ny sehatra misy ahy ho ao amin'ny tranokalako:
Nodioviko tao amin'ny Google Webmaster ny safidiko ary naveriko indray fa tokony hampiasa ilay www ny fonenako voalohany.
Napetrako ny fisie htaccess mba hamindra ny fangatahana rehetra avy amin'ny http://dknewmedia.com mankany http://martech.zone. Aza hadino ny manitsy ny fisie .htaccess efa misy raha misy io (mety takona amin'ny mpanjifanao FTP izy io):
Nanao fikarohana aho ary nanolo ny MySQL mba hahazoana antoka fa ny domain ahy dia voatonona hatrany amin'ny www. Nohavaozako ny latabatro sy ny latabatro momba ny fanehoan-kevitra (ho an'ny URL):
UPDATE `wp_posts` set` post_content` = soloina (`post_content`, 'http: //dknewmedia.com','http: //martech.zone')
Angamba nandany fotoana io, saingy hitako fa tsy handratra na inona na inona izany. Misy eritreritra avy amin'ireo manam-pahaizana momba ny SEO any ivelany any?
Mpanolo-tsaina, mpandraharaha ary mpiasa: mankaiza isika?
Apr 7, 2007 amin'ny 9: 52 AM
Tsy fandaniam-potoana mihitsy. Google dia mahita ny sehatra tsirairay ho toy ny tranokala mitokana ary noho izany ny PR dia mizara roa. Heveriko fa tsy maninona ny fametrahana tranokalan'ny webmaster anao - resaka olona firy no mampifandray ny sehatra tsirairay.
Nesorinao ve ilay rakitra .htaccess? Toa tsy mandeha izao.
BTW, heveriko fa ny tsipika farany dia tokony:
tsy misy ny slash alohan'ny $ 1. Izany dia satria ny regex amin'ilay tsipika teo aloha dia hifanaraka amin'ilay tady manara-penitra, ary hiafara amin'ny fikororohana indroa ianao amin'ny alàlan'ny fanodinana.
Apr 7, 2007 ao amin'ny 5: PM PM
Ny dingana nataonao dia ireo izay mety na dia tsy mandeha aza ny fanodinana anao amin'izao fotoana izao.
Ny zavatra iray hanontaniako dia ny antony nisafidiananao ny kinova www? Tsy misy zavatra tsara kokoa amin'ny URL miaraka amin'ny www. Miaraka amin'i Google izay manondro ny safidiny ho an'ny kinova tsy www dia angamba tokony handeha amin'izany ianao. Mazava ho azy, tiako ho fantatra ny MANINONA Google dia tia ny kinova tsy www alohan'ny handraisana fanapahan-kevitra amin'ny fomba iray na amin'ny lafiny hafa.
Salama SEO Guy!
Ny safidiko voalohany dia ny nanova ny zava-drehetra https://dknewmedia.com/; na izany aza, toa nanimba ny WordPress Permalinks izany - na dia nanova ny toe-javatra WP ho an'ny sehatra aza.
Avy eo dia nanandrana nanova ny zava-drehetra tamin'ny fomba mifanohitra aho - http://www.dknewmedia.com fa tamin'ny fisie htaccess dia nanapaka ny permalinks indray, na dia lavorary aza ny rohy. Ampio ny redirect - tapaka izany, esory ny redirect ary niasa izy. Hafahafa .. satria tsy niova ny URL.
Ka - very hevitra tanteraka aho ary averiko amin'ny laoniny daholo ny zava-nitranga mandra-pahafantatra izay zava-nitranga. Faly aho fa naheno ny fandraisanao ny antony itiavan'i Google ny kinova tsy www… Very hevitra koa aho!
Misaotra ny mod_rewrite-fu. Nanao toy izany tamin'ny bilaogiko halina taorian'ny namakiako azy.
Tena mila manafoana azy io aho. Nanelingelina ny permalinks nataoko izany. Tsy fantatro ny antony… hevitra mahafinaritra izany - saingy tsy nandeha. 🙁
Jereo raha manampy anao ity plugin ity 🙂
Apr 11, 2007 ao amin'ny 5: PM PM
Nahomby aho! Woohoo. Nanavao ny lahatsoratra aho. Misaotra noho ny fanampiana rehetra!
Apr 11, 2007 ao amin'ny 7: PM PM
Inona no fiovana tamin'ny lahatsoratra voalohany?
Rehefa nampakatra ilay htaccess aho dia tsy tsapako fa tena nanoratra momba ilay fisie htaccess nosoratan'i WordPress aho… noho izany dia niasa ny redirect, saingy tsy nahomby ireo URL semantiant. Oops! Azoko omena tsiny ny rindrambaiko FTP manafina ny fisie ary tsy nampitandrina ahy ny amin'ny fanoratana azy io. 🙂
Tena mila ny / $ 1 aho. Raha tsy nisy izany dia tsy nisy slash nanaraka ilay sehatra. Nisy diso koa aho nanana www tao amin'ilay fitadiavana fikarohana.
Ankehitriny aho dia miasa amin'ny famerenana famahanana amin'ny feedburner! Zavatra mahafinaritra!
Apr 13, 2007 amin'ny 7: 37 AM
Miova amin'ny Blogger; -0
Apr 13, 2007 amin'ny 7: 57 AM
May 16, 2007 ao amin'ny 1: 32 PM
Nojereko ny pagerank misy ahy ary tsy nisy ny www ary nanome valiny mitovy amin'izany, noho izany dia tsy mino aho fa mizaka ny maha olona samy hafa ny tranokalako! Heveriko fa zavatra tsara izany. Raha mikaroka ao amin'ny Google momba ny lahatsoratro aho dia hiverina daholo izy ireo raha tsy misy ny www.
Mihevitra aho fa hamela ny zavatra toy ny azy ireo ankehitriny. Mety hampidi-doza ny fisotroan-dronono 🙂
26 Jun 2008 amin'ny 7:08 AM
Izaho koa manana olana amin'ny redirection… manandrana mamily aho http://www.servicedecalculatoare.com.ro ny http://www.ctromania.ro saingy toa izay rehetra ataoko dia tsy hampiala ahy ny mpizara. I; efa nanandrana ny fisintomana rakitra .htaccess sy script php, saingy tsy nisy. inona no soso-kevitrao?
Jun 26, 2008 ao amin'ny 6: 25 PM
tsy maninona fa nataoko! 😀 misaotra ihany